China Desktop Manual Rockwell Ukuqina Tester HR-150A mveliso kunye nabenzi | UKAIRDA
Incwadana yedesktop Rockwell Hardness Tester HR-150A
I-Desktop Manual yeRockwell Hardness Tester HR-150A isetyenziselwa ukumisela ubunzima beRockwell yesinyithi esenziwe ngesinyithi, isinyithi esingenantsimbi kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi. Isantya sokufaka uxinzelelo lovavanyo sinokuhlengahlengiswa sisixhobo sokubambisa, kwaye utshintsho loxinzelelo lufunyenwe ngokujika koxinzelelo olukhetha ivili lesandla. Ukusebenza komvavanyi kulula kakhulu, ngelixa ukusebenza kuzinzile kwaye ke umvavanyi unokusetyenziswa kuluhlu olubanzi. Ingcaciso yeModeli HV-30T yoXinizelelo lokuqala 98 ...
I-Desktop Manual yeRockwell Hardness Tester HR-150A isetyenziselwa ukumisela ubunzima beRockwell yesinyithi esenziwe ngesinyithi, isinyithi esingenantsimbi kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi.
Isantya sokufakwa koxinzelelo kovavanyo sinokuhlengahlengiswa sisixhobo sokubambisa, kwaye utshintsho loxinzelelo lufunyenwe ngokujika koxinzelelo olukhetha ivili lesandla. Ukusebenza komvavanyi kulula kakhulu, ngelixa ukusebenza kuzinzile kwaye ke umvavanyi unokusetyenziswa kuluhlu olubanzi.
Uxinzelelo lokuqala 98N,
Inani elipheleleyo lovavanyo 588N, 980N, 1471N,
Ukucaciswa kwe-Indenter I-Conical Rockwell indenter, i-1.5875 mm ibhola yangaphakathi
Ukuphakama okuphezulu kweempawu (mm) 170mm
Umgama ukusuka kwiziko le-Indenter ukuya kwi-OuterWall 165mm
Ubungakanani boomatshini (DXWXH) (mm) 510 × 230 × 750
Ubunzima (kg) 85
HRA 20 ukuya kuma-88
IHRB 20 ～ 100
HRC 20 ukuya kuma-70
Xa ulinganisa, nceda ukhethe ukungena ngaphakathi kunye namandla ovavanyo ewonke ngokolu luhlu lulandelayo.
Inani elipheleleyo lovavanyo N (kgf)
Iimpawu zokulinganisa uluhlu
Steel1.5888mm ibhola yesinyithi
120 ° idayimane
Isetyenziselwa ukulinganisa isinyithi, ubunzima bayo obungaphezulu kwe-HRC 70 (enje nge-tungsten carbide alloy, njl.) Kunye nokulinganisa izinto ezilukhuni kunye nezinto ezicinywayo zomhlaba.
Isikali C: Isetyenziselwa ukulinganisa ubunzima beengxenye zentsimbi ezinyangiweyo.
Isikali B: Isetyenziselwa ukulinganisa uthambile okanye umbindi wesinyithi esomeleleyo kunye neenxalenye zensimbi ezingacinywanga.
1 Rockwell Ukuqina Tester 1Set
2 Indawo enkulu evulekileyo 1
3 Indawo encinci evulekileyo 1
4 V-inotshi anvil 1
5 Ipentrator yedayimani 1
I-6 yangena ngebhola yentsimbi Φ1.588mm 1
7 Steel ibhola Φ1.588mm 5, abaza kuzisebenzisa
Ibhloko esemgangathweni eyi-8 ye-Rockwell 80-88HRA 1
Ibhloko esemgangathweni yeRockwell 85-95HRB 1
Ibhloko esemgangathweni eyi-10 yeRockwell 60-70HRC 1
Ibhloko esemgangathweni ye-Rockwell eyi-35-55HRC 1
Ibhloko esemgangathweni yeRockwell eyi-20-30HRC 1
13 Umqhubi omkhulu wesikrufu 1
14 umqhubi omncinci wesikrufu 1
Ibhokisi yokuncedisa 1
16 Ikhaka lothuli 1
Umyalelo wokuSebenza 1
19 Ukupakisha uluhlu 1
UKUGCINWA KWE-HARDNESS TESTER
1.Ukuba umvavanyi engasetyenziswanga ixesha elide, kufuneka igutyungelwe ngesigqubuthelo esingenothuli.
2.Zalisa ngamaxesha athile ioyile yomatshini kumphezulu wokunxibelelana nesikrufu (26) kunye nevili lesandla (27).
3.Ngaphambi kokusetyenziswa komvavanyi, coca umphezulu wesikere (26) kunye nomphezulu wokugqibela wesiphelo.
4 Ukuba ixabiso lobunzima elibonisiweyo lifunyenwe likhulu kakhulu kwimpazamo:
1) Susa i-anvil kwaye ujonge ukuba umphezulu wawo onxibelelane nesikrufu ucocekile na
2) Jonga ukuba ingaba ibhatyi ekhuselayo iyayixhasa na anvil.
3) Jonga ukuba i-penetrator yonakele na.
5.Xa usebenzisa amandla amakhulu ovavanyo, isikhombisi sijikeleza ngokukhawuleza kakhulu ekuqaleni kwaye sithe chu, oko kuthetha ukuba ioyile yomatshini kwindawo yokugcina izinto incinci kakhulu. Kule meko, phakamisa i-gasket evaliweyo kwisiphelo sesikhuseli (7), gcwalisa ioyile yomatshini ecocekileyo kwaye ngelixesha tyhala kwaye utsale amaxesha amaninzi izibambo (15) (16) ukufumana ipiston phezulu nasezantsi amaxesha ngamaxesha. , kwaye uwukhuphe ngokupheleleyo umoya kwisikhuseli kude kube yilapho ipiston iyehla iye ezantsi kunye neoyile iphuphuma kuyo.
6.Sebenzisa ibhloko yovavanyo esemgangathweni enikezwe umvavanyi ukukhangela amaxesha ngamaxesha ukuchaneka komvavanyi wobulukhuni.
1) Coca i-anvil kunye nebhloko esemgangathweni kwaye uqhubeke novavanyo kunye nomgangatho osebenzayo webhloko. Akuvumelekile ukuvavanywa ngomphezulu oxhasayo.
2) Ukuba impazamo yexabiso elibonisiweyo lilikhulu, ngaphandle kokujonga ngokwento yesi-4 salesi sahluko, jonga ukuba umphezulu oxhasayo webhloko yovavanyo esemgangathweni uneburrs. Ukuba kule meko, uyipolishe ngelitye leoyile.
3) Ukuba ukuvavanywa kwibhloko esemgangathweni kwiindawo ezahlukeneyo, ibhloko kufuneka kutsalwe kumphezulu wesikhombisi kwaye ingasuswa kwi-anvil.
Egqithileyo Ultrasonic Ukuqina Ukuqina Tester KH270W
Okulandelayo: Idigital Bench Rockwell Hardness Tester HRS-150
Eziphathekayo Leeb Ukuqina Tester KH180
Unxweme i-Durometer yokuqina kovavanyo lweNxweme i-Sore D ...
Unxweme D ubude beTester
Ultrasonic Ukuqina Ukuqina Tester KH270W